वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको निधनको खबरले एकैचोटि ‘सिङ्गो देश’ नै स्तब्ध भयो । आफन्त, शुभचिन्तक र देवकोटाले उपचार गरेर विसेक भएकाहरु रोए, चिच्याए । तर, देवकाटाकी श्रीमती मधुसँगै छोरीहरु मेधा, बशुधा र मञ्जरी रोएको, कराएको देखिएन । बरु, बाबाको मृत शरीरलाई पनि दुख्ला कि भनेर स्याहार गरेर बसे । आफैंले शव बोके । आर्यघाटमा मधुले मुखाग्नी दिइन्, छोरीहरु छेवैमा बसे । र, उनीहरु आफैं किरिया बसेका छन् । काजकिरियालाई १३ दिनबाट छाट्याएर ५ दिनमा सक्दैछन् ।
स्पष्ट छ कि, हाम्रो समाज पुरुषसत्तावादी सोचबाट नराम्ररी ग्रस्त छ । र, हाम्रा धर्मिक, सामाजिक मूल्य र मान्यताहरु पनि त्यसैबाट प्रभावित छन् । त्योमध्येको हो, मृत्युसँस्कार ।
विशेषगरी हिन्दूधर्मी सँस्कृतिमा महिलालाई अपेक्षा गरिएको छ । भलै त्यो धर्मग्रन्थमा लेखिएको होस् या नहोस् ! तर, धर्मको हबला दिएर नारीमाथि उपेक्षा गरिएकै छ । अतिउपेक्षा भएपछि अहिले आमनारीमा क्रमशः विद्रोहको भाव जाग्दैछ । उनीहरुले सशक्त ढंगमा समानताको आवाज उठाउन थालेका छन् । र, आफ्नो ठाउँबाट सक्दो विद्रोह पनि गरिरहेका छन् । त्यसकै एउटा नमूना हो, स्वर्गीय डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाकी श्रीमती र छोरीहरुले मृत्युसँस्कारमा देखाएको साहस !
‘नारीले शव छुनै हुँदैन’ भन्ने ‘कुमान्यता’ लाई चुनौति दिँदै डाक्टर देवकोटका छोरीहरुः मेधा, बशुधा र मञ्जरी देवकोटाले बाबाको शव बोके, श्रीमती मधु दीक्षितले दागबत्ती दिइन् । अनि, उनीहरु नै कोराभित्र किरिया बसे । अझ मृत्युसँस्कारलाई उन्नत र परिस्कृत गर्नकै लागि उनीहरुले ७ दिनमै काजकिरिया सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । जुन परिस्कृत समाज निर्माणको एउटा हिम्मतिलो प्रयास हो । यस्ता कर्महरुले हाम्रो पुरातन मान्यताहरु भत्काउन ठूलो टेवा पुग्नेछ । यसबारे सँस्कृतिविद् बिना पौडेलको तर्क छ, समाजसँगै सँस्कृति, मूल्य र मान्यता पनि क्रमशः परिस्कृत हुँदै जानुपर्ने अर्थमा डाक्टर देवकोटाकी श्रीमती र छोरीहरुले सकारात्मक प्रयास गरेका छन् ।
कुनै पनि सँस्कारको आफ्नै नियम त हुन्छ नै । तर, त्यो कति व्यवहारिक र आधुनिक समाजमैत्री छ ? भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । कसैको मृत्यु भएपछि १३ दिन नै कठोरसँग बस्नुपर्ने भन्ने छैन । त्यो त एउटा सम्मान हो, सम्झना हो ।
‘समाज परिवर्तन गर्नु छ भने सुरुवात आफैंबाट गर्नु पर्छ’ भन्नेकुरा सन्देश दिएका छन्, डाक्टर मधु दीक्षितसँगै मेधा, बशुधा र मञ्जरीले । शोकलाई शक्तिमा बदल्दै समाज रुपान्तरण गर्ने साहस गर्नु चानचुने कुरा होइन । उनीहरुको सत्प्रयास यो समाजका लागि अनुकरणीय छ ।